Ahoana no Hitiavan’ny Ankizy An’Andriamanitra? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Goujrati Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Malagasy Malayalam Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Télougou Umbundu Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Ahoana no hahatonga ny ankizy ho tia an’Andriamanitra?
Ampiasao ny zavaboary mba hanampiana ny zanakao hahalala sy ho tia an’Andriamanitra
Tsy ho tia an’Andriamanitra ny zanakao raha tsy manana porofo hoe misy izy sady tia azy ireo. Mila mahafantatra an’Andriamanitra izy ireo mba ho tia azy. (1 Jaona 4:8) Mila fantany, ohatra, hoe: Nahoana Andriamanitra no namorona ny olona? Nahoana isika no avelany hijaly? Inona no hataony ho an’ny olona amin’ny hoavy?—Vakio ny Filipianina 1:9.
Mila asehonao amin’ny zanakao koa hoe tia an’Andriamanitra ianao. Azo inoana fa hanahaka anao ny zanakao rehefa mahita an’izany, ka ho tia azy.—Vakio ny Deoteronomia 6:5-7; Ohabolana 22:6.
Ahoana no hampianaranao ny zanakao?
Mahery ny Tenin’Andriamanitra. (Hebreo 4:12) Ampio àry ny zanakao hahafantatra an’izay voalaza ao. Tahafo ny fomba fampianatr’i Jesosy raha tianao hilentika any am-pony izay ampianarinao. Nametraka fanontaniana i Jesosy, nihaino ny valiny, ary nanazava ny Soratra Masina rehefa nisy zavatra tiany hilentika any am-pon’ny olona.—Vakio ny Lioka 24:15-19, 27, 32.
Tantaraina ao amin’ny Baiboly koa hoe ahoana no nifandraisan’Andriamanitra tamin’ny olona taloha. Hahalala sy ho tia an’Andriamanitra ny ankizy raha hainy ireny tantara ireny. Misy zavatra maro natao hanampiana azy amin’izany ao amin’ny www.jw.org/mg.—Vakio ny 2 Timoty 3:16.
Hanampy ny ankizy hampifaly an’Andriamanitra ireto video sy hira ary kilalao azo atao pirinty ireto.
Inona no Fomba Fampianatra Mandaitra Indrindra?